Kooxaha samatabixinta oo kumannaan qof guryahooda ka saaray kaddib dab ka kacay California - BBC News Somali
Image caption Magaalada Paradise, oo ay ku nool yihiin 26,000 oo qof, ayaa dadka lagu amray inay isaga baxaan
Kumannaan qof ayaa laga saaray Waqooyiga California iyadoo dabeylo holac wata oo keymaha ka kacay ay ku wajahan yihiin dhowr magaalo oo ku yaalla buuralleyda Sierra ee dalka Mareykanka.
Dabkan oo shalay ka kacay meel u dhow Camp Creek, ayaa waxaa sii huriyay dabeylo xooggan iyo keymaha oo qallalan.
Magaalooyinka deriska la ah, iskuullada iyo isbitaallada ayaa dadka laga saaray, iyadoo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Paradise ay ku xayiran yihiin meesha.
Maamulka gobolkaasi ayaa sheegay inay jirto khasaaro ka dhalatay dabkaasi.
Dab baar ka kacay oo dad ku laayay Faransiiska
Dad lagu la'yahay dab ka kacay Mareykanka
Jawiga dabeylaha ayaa gaaray 50mph (80km/h), waxayna taas sababtay in holacu uu muddo saacado yar gudahood ku gaaro meelo badan, dadka qaarkood ayaa ku qasbanaaday inay ka tagaan gawaaridooda ayna lug ku baxsadaan, sida ay werisay warbaahinta gudaha.
Koofurta fog ee deegaanka Ventura oo u dhow Los Angeles, dabeylo xooggan ayaa adkeeyay dadaallada looga hortagayo holac kale oo ka kacay meel wax yar u jirta halka ay ka dhacday toogashadii ay Arbacadii ku dhinteen 12 qof.
Image caption Dad-damiyeyaasha ayaa badbaadinayay dadka ku baxsaday lugta
Image caption Bukaannada ayaa laga saaray isbitaal la rumeysan yahay inuu gubtay
Image caption Dabka xoogga ku socday ayaa galaaftay maqaayadda KFC
Waxaa socda daad gureynta dadka looga saarayo magaalada Paradise ee waqooyiga California, oo hoy u ah qiyaatsii 26,000 oo qof, iyo sidoo kale Magalia, Concow, Butte Creek Canyon iyo Butte Valley.
Kooxaha gargaarka degdegga ah ayaa ka shaqeynaya samatabixinta dadka halkaasi ku xayiran.
Image caption Dabeylo xooggan iyo keymaha oo qallalan ayaa dabka u sii huriyay holaca
Mid ka mid ah dadka ku nool Paradise oo ka qaxay halkaasi ayaa yiri: "Aad bey u kululeyd. Waa la dareemi karay."
Qaar kale ayaa sheegay inay arkayeen holaca oo baabi`inaya hantidooda, xilli iyaga laga daad gureeyay halkaasi.
Baraha bulshada, ayay dad badan ku wadaagayeen sawirrada waddooyinka oo uu dba ka kacay ama uu qiiq daboolay, waxayna codsanayeen in loo fidiyo gargaar oo qoysaskooda iyo saaxiibbadooda halkaasi laga saaro.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @AlanIngram02
— Alan (@AlanIngram02) 08 Bisha Kow iyo Tobnaad 2018
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @AlanIngram02
Gobolka ayaa wuxuu la daalaa dhacayaa dab ka kacay keymaha, kuwaas oo ay ku jiraan kuwii ugu darnaa ee Mareykanka soo mara, dabka Mendocino iyo Thomas oo tan iyo sanadkii hore far aba`an ku hayay gobolkaasi.